Shil Baabuur Oo Aad U Naxdin Badan Oo Xalay Xilli Danbe Ka Dhacay Gudaha Hargeysa+Khasaaraha Dhimasho Iyo Dhaawac Ee Ka Dhashay - Wargane News
Home Somali News Shil Baabuur Oo Aad U Naxdin Badan Oo Xalay Xilli Danbe Ka...
Shil Baabuur Oo Aad U Naxdin Badan Oo Xalay Xilli Danbe Ka Dhacay Gudaha Hargeysa+Khasaaraha Dhimasho Iyo Dhaawac Ee Ka Dhashay
Shil baabuur oo aad u naxxdin baddan ayaa xalay xilli danbe oo saacaddu ku siqaysay 2 habeenimo,waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaana xaafadda Saba-Xareed ee Koonfurta magaalada Hargeysa.
Gaadhigan oo ahaa kuwa raaxada ee loo yaqaan INdho-cadde ayaa waxa saarnaa Lqof oo dhalinyaro ahaa,kuwaas oo kasoo dareeray xaflad Aroos sida ay Ramaasnews u xaqiijiyeen dad goob ku sugnaa mar aanu gaadhnay.
Waxaana gaadhigan oo xawaare sare ku soconayay uu ku dhacay Sabbada Saba-xareed,waxaana ka dhashay shilkaasi Baabuur khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Goob joogayaal aan goobta ku gaadhnay waxay Ramaasnews u xaqiijiyeen in Saddex qof ay ku dhinteen gaadhiga,balse warar kale oo soo if baxaya ayaa waxay iyaguna sheegayaan in ay dhinteen Shan qof oo uu ka badbaaday hal wiil kaas oo koomo ku jira sida ay wararku sheegayaan.
Taliyaha ciidanka Taraafikada Somaliland ahna afhayeenka Ciidamada Booliska oo Ramaasnews isku dayday saaka inay khadka telefoonka kula xidhiidho si ay u waydiiso khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay shilkaasi baabuur ayaanay noo suurto galin telefoonkiisa gacanta oo uu ka jawaabi waayay awgeed.
Somaliland: Guddida Doorashooyinka Oo Cayimay Wakhtiga Diwaangalintu Bilaammayso